Okokusebenza kokuzivocavoca ongakuthenga ukusebenzisa ekhaya njengoba i-coronavirus quarantine iyaqhubeka
Ishadi Lokukhiqiza Okugelezayo
Ukusethwa kokuzivocavoca kwasekhaya okuphelele kusho ukuthi akusafanele ukhokhe ubulungu bokuzivocavoca noma umqeqeshi womuntu siqu. Konke okudingayo yimishini yokusebenza efanelekile.
Futhi amathuluzi wakho wokukhetha azohluka ngokuya ngezinga lakho lokuqina nezinjongo zokuqina. Uzama ukunciphisa umzimba? Ungase uthande ukushisa amakhalori ngemishini ye-Cardio enjenge-treadmill noma ibhayisekili elimile. Ufuna ukukhala noma ukwakha izicubu zomzimba? Thatha isethi yama-dumbbells bese ungena enkambisweni yokuqeqesha amandla.
Uma kwenzeka udinga ukuvuselela izinzuzo zokuzivocavoca njalo: Ngokwe-Centers for Disease Control and Prevention, kungathuthukisa impilo yakho yobuchopho, kukusize ukuphatha isisindo sakho, ukunciphisa ingozi yakho yesifo senhliziyo, kuqinise amathambo nemisipha yakho, ukwenza ujabule kakhulu.
Noma ngabe usetha isitolo egaraji lakho, igumbi lakho lokuhlala noma igumbi lakho lokulala - heyi, yini okusebenzayo! - nansi imishini yokuzivocavoca yasekhaya oyidingayo ukuze udale owakho umsebenzi wokubulala ekhaya.
Isikhathi sokuthumela: Jan-10-2020
Ikheli: No.2 Zhengxian Road, Town Pa Paoche, Pizhou City, Provincia Jiangsu, China
Umakhala ekhukhwini: 86- (0) 516-66220516